Booliska oo sheegay in rag ka tirsan ururka Al-Shabaab ay joogaan suuqa Bakaaraha iyo howlgallo saakay halkaasi ka bilowday
Bar ciidan oo ku taala isgoyska Aadan Cadde ayaa xalay lagu tuuray bambo gacmeed, kaasi oo aan geysan wax qasaare ah oo soo gaaray ciidamadii halkaasi ku sugnaa, waxaana taliyaha ciidamada nabadgelyada ee suuqa bakaaraha uu sheegay in saakay howlgallo ay ka bilaabeen nawaaxiga suuqaasi.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamada Dowlada ay xalay fiidkii markii uu bambku qarxay kaddib ay sameeyeen howlgallo ay ku baarayaan cidii ka dambeysay qaraxa bambo gacmeed, hase yeeshee ma jirto cid ay u soo qabteen.
Gaashaanle Saciid Xasan Jimcaale Taliye K/Xigeenka ciidamada Booliska oo u waramayay warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in rag ka tirsan ururka Al-Shabaab ay bambo gacmeed ku tuureen maalintii shalay suuqa bakaaraha gaar ahaan qeybta dahablaha, halkaasi oo waxyeello ka soo gaartay haween fara badan. Howlgallada saakay ka bilowday suuqa Bakaaraha ayaa la sheegayaa in ciidamada ay ku soo qabqabteen rag looga shakiyay inay ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana gudaha suuqa ka wada falal isugu jira dilal iyo qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanayay suuqaasi.
Dhinaca kale Taliska ciidamada Booliska suuqa Bakaaraha waxa uu sheegay in howlgaladooda ay sii kordhinayaan, wuxuuna caddeeyay in rag ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin suuqa Bakaaraha, kuwaasi oo uu sheegay in gudaha ay ka abaabulaan falal amniga suuqa lagu khalkhal gelinayo.